Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ngwa ahịa na -ere akpụkpọ ụkwụ Pingtai
Uru nke akpụkpọ ụkwụ track
Ngwongwo dị iche, ike dị elu, obere ike na akwa, ihe na-ama jijiji
Ọtụtụ mgbe, enwere oghere njikọ anọ na akpụkpọ ụkwụ egwu yana oghere nhicha abụọ ọzọ n'etiti, oghere nhicha nwere ike kpochapụ efere ahụ na -akpaghị aka. Efere abụọ gbara agbata obi nwere akụkụ ịkpakọba ihe. Iji zere iberibe okwute etinyere n'etiti ma mebie, a ga-eji akpụkpọ ụkwụ soro nwere akpụkpọ ụkwụ swamp track-triangle ma ọ bụrụ na onye na-egwupụta ihe na bulldozer na-agba na ala mmiri, n'ihi na triangle –ọdịdị nwere ike pịa ala dị nro ma nwekwuo ikike nkwado.
Ka ọ dị ugbu a, enwere ike kewaa efere egwu bulldozer ahụ n'ụdị abụọ: efere dị larịị nwere ụdị ezé na ụdị ezé na-abụghị nke V nwere akụkụ obe (akpụkpọ ụkwụ track apịtị.）. A na -eji ụzọ egwu abụọ a na ala nkịtị na gburugburu ala mmiri mmiri, mana mgbe bulldozer na -arụ ọrụ na tundra, ha na -eche ihu ọnọdụ ala abụọ: tundra siri ike, dị larịị na obere okpomọkụ yana apịtị, ala mmiri dị nro na oke okpomọkụ. Na gburugburu ebe a, ọ bụ ezie na bọọdụ egwu nwere ezé nwere ike ịrụ ọrụ na permafrost, mgbe ọ na-arụ ọrụ n'ime ala mmiri, nnukwu ala ga-arapara na ya, na-ebute ọdịda nke nrapado nke egwu ahụ. N'ihi ihe isi ike nhicha, ọ ga-etufu nnukwu ike iji mee ka ọ dị ọcha tupu ịga n'ihu na arụ ọrụ, nke na-emetụta oke nrụpụta nke ọma. adabaghị maka ọnọdụ permafrost n'ihi enweghị ezé egwu, na -ebute enweghị njigide siri ike.
Ihe nrịba ama ụdị bulldozer crawler efere nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara na -emeri adịghị ike nke efere crawler dị ugbu a ma nwee uru nke ụdị efere crawler ọdịnala abụọ. Ọ na-enye ụdị atụmatụ bọọdụ ihu igwe niile maka bulldozer na akụrụngwa ndị ọzọ na-eje ije ka ha rụọ ọrụ na gburugburu ala kpụkọrọ akpụkọ, nke nwere ike ịkwalite arụmọrụ ọrụ nke bulldozer na ngwa ndị ọzọ na-eje ije. Ebumnuche nke ihe eji eme ihe bụ ịghọta n'ụzọ na-esote, gụnyere efere efere nke nwere ụdị V nke a na-enye ahụ akụkụ ya nwere ezé crawler n'ọnụ ala nke efere efere. Akụkụ obe nke ezé crawler bụ trapezoidal. Akụkụ ngalaba nwere akụkụ V nwere unyi adịghị mfe, dị mfe ịsacha, nnukwu uru buoyancy, n'ime ala mmiri nke crawler nwere ike ezé nwere uru nke permafrost, gbochie mmịpụ, si otú a dozie ngalaba ọdịnala enweghị ike imeghari na ọnọdụ gburugburu permafrost. nke ụdị nsogbu ala abụọ na -ahụkarị, melite arụmọrụ nke ụgbọ ala esoro.
Njirimara efere bọlbụ ahụ bụ ngalaba nke ezé egwu na trapezoidal. A na -enye ihe nkedo nchara ihe eji arụ ọrụ na nkwado nke ime, a na -enye efere crawler oghere oghere.
Sochie nkọwa nkọwa akpụkpọ ụkwụ
Nkọwa: TRACK akpụkpọ ụkwụ Ngwuputa ọrụ
Ekweghị ekwe: HRC42-49
Track akpụkpọ ụkwụ Mechanics Njirimara
Ngwakọta kemịkal (%)
Nke gara aga: Sochie Roller ugboro abụọ Flange
Osote: Sochie Mgbakọ Cylinder Adjuster
Onye na -egwu ihe na -agba bọket, Ndị na -agba egwu Rubber Track, Bit ejedebela ugboro abụọ, Ike kpọchie, Iburu Track ala, Ihe mkpuchi ihe mkpuchi ịwụ,